Slacko64 Puppy 7.0 inouya nekuvandudza, rutsigiro rweEFI uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Makore mana mushure mekupedzisira makuru ekuvandudza, kuvhurwa kwe iyo nyowani vhezheni yekuparadzira minimalist Slacko Puppy 7.0 iyo inoshandisa hwaro hweiyo Slackware package uye Puppy Linux matekiniki senge Woof-CE yekuumbiridza system.
Kugovera kwacho kunoratidzika kuve kunoenderana zvizere neSlackware Linux, asi zvakare inokutendera iwe kuti uise PET mapakeji akanyatsogadzirirwa Puppy Linux.
1 Nezve Slacko64
1.1 Nezve Slacko64 Puppy 7.0
1.2 Dhawunirodha Slacko64 Puppy 7.0
Kugovera inoshandisa JWM windows maneja uye Rox Filer faira maneja. Iko kuendesa kunosanganisira seti yeGUI (Puppy Control Panel) zvigadziri uye mawadhi (Pwidgets - wachi, kalendari, RSS, chinongedzo chinongedzo, nezvimwewo) zvakagadziriswa zvakadzika mukati mePuppy chirongwa.
Iyo inowirirana yeyakajairika Puppy kunyorera, senge Pmusic uye Pequalizer, inogadzirwa ichishandiswazve vhezheni vhezheni yeGtkDialog chirongwa.
Kugadzirisa network kubudikidza newaya uye isina waya yekutaurirana chiteshi, iyo Frisbee Network Manager pachayo inogadziridza inoshandiswa, kuwedzera kune kuendesa kunosanganisirawo akareruka Nyore Network Setup uye Network Wizard zvigadziriso.
Nezve Slacko64 Puppy 7.0
Mune iyi vhezheni itsva yekuparadzira base inobvumirana neSlackware 14.2 uye zvinyorwa zveSalix.
Zvakare pasoftware side, Firefox ESR mabhurawuza akagadziridzwa uye yatumira iyo Samba chishandiso nekukasira kwekugovana faira pakati peWindows neLinux
Imwe shanduko yakakosha inomira kubva mushanduro nyowani ndiyo tsigiro yekubhururuka muzvirongwa UEFI uye pamwe neiyo nyowani FrugalPup simaki yakawedzerwawo, iyo inotsigira kuisirwa pane masisitimu ane UEFI neBIOS, pamwe nekugona kwekumisikidza iyo system kwete chete pane rakaomarara dhiraivha, asiwo kune ekunze USB uye SD / MMC anotyaira.
Mukukosha, Slacko64 Puppy 7.0 ikozvino inosanganisira nyowani dzakateedzana 4 LTS Linux kernels uye Joe's Window Manager 2.3.6 (JWM) kunyangwe kana mushandisi achida kuchinja macores avo muPuppy, iyo nyowani uye yakavandudzwa "change_kernels" script inogona zvakare kushandiswa.
Uye chirongwa chetsva chitsva chave kuchiratidzwa, mifananidzo yacho yakagadziridzwa, uye mushandisi interface yakagadziriswa.
Yeimwe kiyi shanduko dzinomira pachena yeiyi vhezheni itsva, zvinotevera zvinomira pachena:
Kunatsiridza muchirongwa che graphical firewall
Sisitimu-yakafara icon uye graphical mushandisi interface yekuvandudza
Seamonkey kuwanikwa muSlackware repository (32-bit uye 64-bit)
Ffmpeg uye anotsigira zvirongwa, kusanganisira Pmusic uye Mplayer
Ongororo yekuyedza yeUFI maturusi, efivarfs, efivar, mokutil, sbsigntool
Kugona kubhowa kubva kuIO mafaera kubva kune rakaomarara dhiraivha kana USB chishandiso uchishandisa Super
Grub2 JWM windows maneja yakagadziridzwa kuita vhezheni 2.3.6.
Shanduro nyowani yeFirefox ESR inopihwa seyakanyanya browser Seamonkey inowanikwawo mune zvinyorwa uye pane script yekuisa iyo Vivaldi browser.
Yakagadziridzwa GUI chirongwa chekumisa packet firita.
Iyo yekutanga package inosanganisira iyo Samba package.
Evince inoshandiswa kuona PDF.
Pakupedzisira, kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo Nezve iyi vhezheni vhezheni, iwe unogona kutarisa iyo ruzivo mune yepamutemo chiziviso. Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Dhawunirodha Slacko64 Puppy 7.0
Kune avo vanofarira kugona kurodha pasi vhezheni iyi yekuparadzira iyi kune yavo kifaa, vanogona kuzviita zvakananga kubva kurodha peji kubva kwatingawane iyo system mifananidzo yakagadzirirwa ese 32-bit uye 64-bit masisitimu.
Inofanirwa kutariswa kuti Slacko64 ndeimwe yezvikamu zvishoma zveLinux izvo zvichiri kupa 32-bit rutsigiro, uye hazvidi zviwanikwa zvakawanda kuti zvishande:
Zve 32-bit: 1 GHz processor (P4 kana yakazotevera modhi AMD K7), 512 MB ye RAM uye kuwana kune bootable CD, USB bootable kana network boot kupinda.
Ye 64-bit: 1,6 GHz processor (IA64 kana amd64), 1 GB ye RAM uye kuwana boot CD, USB boot, mmc / sdcard boot, kana network boot kupinda.
Kana chiri chishandiso chaunogona kushandisa kurekodha iyo system mufananidzo, unogona kushandisa Etcher inova iyo multiplatform chishandiso kana yakananga muLinux kubva kune iyo terminal nerubatsiro rweDD rairo kana iyo yaunofunga kuti yakakodzera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Slacko64 Puppy 7.0 inosvika pamwe nekuvandudzwa, rutsigiro rweEFI uye nezvimwe